Sales Executive (For Consumer Electronics) at RH Company Limited | MyJobs
/ Sales Executive (For Consumer Electronics)
Sales Executive (For Consumer Electronics)
RH Company Limited
Sale Supervisor/Sale Executive ဝန်ထမ်းလိုရှိသည် လစာ - Negotiable လုပ်ငန်းအမျိုးအစား - Consumer Electronics (Ref:, TV:, W/M, Fre:, etc.)
Sale Supervisor/Sale Executive ဝန်ထမ်းလိုရှိသည်
လစာ - Negotiable
လုပ်ငန်းအမျိုးအစား - Electronics (Ref:, TV:, W/M, Fre:, etc.)
- Electronics အရောင်းပိုင်း အနည်းဆုံး (၃နှစ် မှ ၅ နှစ်)ရှိရမည်
- အရောင်းပိုင်းနှင့်ပတ်သက်ပြီး အတွေ့အကြုံကောင်းကောင်းရှိရမည်
- Electronics ပိုင်းနှင့်ပတ်သက်ပြီး နယ်အတွေ့အကြုံရှိသူများ ဖြစ်ရမည်။
- နယ် Electronic Dealer များနဲ့အဆက်အသွယ် ကောင်းကောင်းရှိသူဖြစ်ရမည်။
- Electronics အရောင်းပိုင်းအတွေ့အကြုံမရှိသူများ လုံးဝထည့်စဉ်းစားမည်မဟုတ်ပါ.။
Interview Location - RH Office, No.186/188, Pansodan Middle Block, Kyautada Township, Yangon